Yesmail dia manampy trangam-pitaterana mailaka ivelany ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny toetrandro | Martech Zone
Talata, Oktobra 14, 2014 Talata, Oktobra 14, 2014 Douglas Karr
Amin'ny maha mpivarotra antsika, dia mihevitra ny angon-drakitra sy ny fitondran-tenan'ny mpanjifa izahay ho toy ny saha tsy miova toy ny taona, kaodim-paositra ary tompona trano. Na izany aza, tsy tratrantsika ny hetsika mivantana izay miseho manodidina ny fiainan'ny mpanjifa. Ny hetsika tsotra toy ny fiovan'ny toetr'andro dia afaka manova ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny fahazarany miantsena. Raha eo an-dàlana, ohatra, ny oram-panala dia mety miantsena kodiarana vaovao isika na mpangalatra volom-borona amin'ny lalantsika.
Ny serasera kendrena, ara-potoana ary mifandraika amin'ny zava-misy dia mahazo ny fifandraisan'ny mpanjifa ambony indrindra. Ny fampielezan-kevitra voahitsaka dia mifanaraka amin'ireto mpandika teny rehetra ireto ary mazàna mahatratra 2.5 heny noho ny tahan'ny fampielezan-kevitra toy ny mahazatra ary indroa ny tahan'ny tsindry nataony. Na izany aza, ny mpivarotra dia mbola sahirana amin'ny fametrahana sy fametrahana hafatra vao manomboka. Yesmail Trigger Intelligence mamela ny mpivarotra hampiasa ny herin'ny toetrandro voajanahary sy ny hetsika ara-panatanjahantena hametraka fampielezan-kevitra amin'ny mailaka nateraka izay miresaka amin'ny tombotsoan'ny mpanjifan'izy ireo, ny toerana misy azy ary ny tontolo iainany, amin'ny fotoana tena izy.
Matetika, ireo mpanome tolotra mailaka dia mahatonga ny mpanjifa ho tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana mailaka amin'ny alàlan'ny programa fampiharana. Mahafinaritra ny mahita Yesmail Trigger Intelligence natolotra, nanamora ny fampidiran'ny orinasa antonony ny fampielezan-kevitra amin'ny hetsika marketing.
Fampiroboroboana ny faharanitan-tsaina amin'ny toetr'andro
Trigger Intelligence for Weather dia ahafahan'ny mpivarotra mandahatra fampielezana mailaka izay manolotra tolotra rehefa misy toetr'andro mialoha ny toetr'andro amin'ny toerana jeografika iray. Ny sivana toetr'andro dia misy:
Rano hafainganam-pandehan'ny rivotra
Toetr'andro: rahona, zavona, orana mangatsiaka, havandra, orana, lanezy, manaloka, oram-baratra
Fampiroboroboana ny fitsikilovana ho an'ny fanatanjahan-tena
Ny Trigger Intelligence for Sports dia manome ny mpivarotra fahaizana mandahatra fifandraisana amin'ny mailaka izay miparitaka rehefa misy ny valin'ny hetsika ara-panatanjahantena manokana. Anisan'izany ny sivana fanatanjahan-tena:
Faharetana (fahavitan'ny lalao, antsasak'adiny, fahavitan'ny telovolana / fe-potoana)
Vokatra farany (fandresena / fatiantoka)
Isa azo (aorian'ny fizarana 5, taorian'ny tanjona voalohany, taorian'ny harona 1, sns.)
Tags: mailakafanentanana mailaka fanatanjahantenampamono mailaka momba ny toetrandroyesmailmpiorina mailaka yesmailmpiorina yesmailenymail dia mitarika faharanitan-tsaina